Roobab Mahiigaan Ah Oo Xalay Saacado Baddan Hayay Hargeysa Iyo Xukuumadda Somaliland Oo Ka Hadashay Kahsaaraha Uu Geystay | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madaxweyne Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil ayaa maanta kormeer ku soo maray meelo ka mid ah xaafadihii xalay roobkii ka da’ay ee caasimada Hargeysa. Kadib markii roob mahiigaan ah oo xalay dhawr saacood hayay magaalada la ogaaday
inuu geystay kahsaare nafeed iyo bur bur dhinaca wadooyinka ah.
Iyadoo Roobkaa xalay ka da’ay magaalada hargeysa ilaa inta la ogyahay ay ku dhinteen laba qof, isla markaana wadooyinka qaarkood daadku jaray, waxaana wadooyinka roobkaa mahiigaanka ahi jaray ka mid ah wadada dhinaca bari ka xigta Madaxtooyada Somaliland ee qabata Maxkadda sare, taas oo gebi ahaanba maanta xidhnayd.
Maayarka Caasimadda Hargaysa Eng Xuseen Maxamuud Jiciir, ayaa sheegay inay Roobabkii xalay ka da’ay magaalada Hargaysa ay ku dhinteen laba carruur ah oo uu Gidaar ku dumay, isla markaana ay qaar kalena ku dhaawacmeen Roobabkaas watay Dabaylo xooggan, muddo saacado badan ahna si is-daba-joog u da’ayey.
Waxa sidoo kale, uu Roobku keenay in wakhti ku began 10:00 habeenimo ee waqtiga saacada Hargeysa, isagoo si xidhiidh ah u da’ayay qiyaastii saddex saacadood, taas oo keentay inuu Laydhku ka go’o inta badan magaalada Hargeysa, gaar ahaan Xaafadaha ay Korontada u shidaan Shirkadaha gaarka loo leeyahay qaarlood iyo kuwa dawladda labadaba, kuwaas oo damiyey Mishiinnada Laydhka dhaliya, iyaga oo ka cabsi-qabay in Korontadu ay keento khasaare nafeed.
Koronto-laáanta ay Habeen-hore Roobabku sababeen, ayaa kalliftay in Telefishannada maxalliga ah ee laga daawado Hargeysa gudaheeda ay qaarkood hawada ka baxaan, ka dib markii Roobabku ay saameeyeen Laydhkii u baxayay. Roob sidaa kan khasaaraha keenay u miisaan weyn, ayaan in muddo ahba Hargeysa ka di’ín, waxaanu Dhagxaan iyo Ciid tiro badan ku ururiyey Daadka Roobku badhtamaha iyo daafaha magaalada Hargeysa, taas oo keentay inay Waddooyinka magaalada qaarkood ay xidhmaan, isla markaana ay goáan. Kadib markii ciid iyo dhagxaani buuxisay, isla markaana wadooyinka qaarkood noqdeen baliyo oo ay weli ku jiraan Biyihii.
Gaadiidka Magaalada hargeysa ayaa saaka saxmad iyo cidhiidh kala kulmay wadooyinka qaarkood markii ay gebi ahaanba xidhmeen, kuwaas oo waayay meel ay kala maraan. Iyadoo roob kale oo mahiigaan ahi mar kale galabta ka da;ay qaybo ka mid ah caasimada Hargeysa, balse aanay weli soo bixin waxyeelo uu geystay.
Roobabka hiigaanka ah oo todobaadkan si toos ah uga bilaabamay dalka ayaa jebiyay abaartii mudada dheer soo jiitantay ee ka taagnayd dalka, taas oo nolosha dadka iyo xoolahaba khatar gelisay.